Ukuhlukumezeka Komphefumulo? - Christian Literature Fund
By ghydadmin	All, Pamphlets, Social Issues ZUL136
Ukuzibulala Akuyona impendulo
Ukuzizwa uphansi usuku noma izinsuku ezimbili akusikhona ukuhlukumezeka komphefumulo lokho, ukuhlukumezeka komhefumulo kungaphezulu kwalokho. Ukuhlukumezeka komphefumulo kufana nokuntanta echibini elimnyama elikuminzisayo.
Ukuhlukumezeka kususa ukunqoba kwakho, kwenze umhlaba ubemnyama kuwe nakuba ilanga likhanya. Ukuhlukumezeka komphefumulo kungakubulala, ngoba yiyona mbangela yokuzibulala, yingakho kubalulekile ukukuqonda.
Wena uqobo ukuze uqonde ukuthi kwenzekani ungalahlekelwa yithemba.
Komuye omthandayo ngoba ngaphandle kokuqonda nokuba nesihe / uzwelo ungaba lukhuni ube no nya komunye odingayo.
Ukuhlukumezeka komphefumulo yisifo Akusikho Ukufuna ukunakwa
Ukuhlukumezeka komphefumulo kungubuthi obucinanisa ingqondo yakho, kuyisifo esithinta umzimba wakho, umqondo kanye nemizwa.
Ngakho akunakwenzeka ukunqoba ukuhlukumezeka komphefumulo ngentando yakho nje, kuhlukile kunokuzizwa ulahliwe uma izinto zingahambi kahle.
Ukuhlukumezeka komphefumulo kuqhamuka / kuvela ngaphakathi, hhayi ezimweni ezinzima zangaphandle.
Ukuqonda Ukuhlukumezeka Komphefumulo Kuya-siza Ukuze Ukwazi Ukunqoba Ukuhlukumezeka komhefumulo kufanele kuhluka-niswe nokuzizwa ulahliwe ngokujwayelekile. Bheka loluhla olulandelayo, Uma kungaphezulu kokuhlanu kwalokhu kuliqiniso elenzeka kuwe, kufanele ukuba ucele usizo kuban-tu abaqeqeshiwe njengoDokotela noma abaze-ngqondo:
Ikusasa libukeke limnyama kimi.
Angisazijabuleli izinto njengaphambilini.
Ngizizwa nginecala ngifanelwe ukujeza.
Ngizwa kunzima ukuthatha izinqumo.
Umsebenzi nokubekiwe ukukwenza kuthatha igxathu elikhulu.
Indlela engijwayele ukulala ngayo iphazamisekile, ngilala kakhulu noma kuba nzima ukufikelwa ubuthongo.
Kuvelaphi Ukuhlukumezeka Komphefumulo
Lamaqiniso abalulekile kakhulu. Uma emndenini wakho kukhona ohlukumezekile ngokomphefumulo usengcupheni, ufanele ukwazisa amalunga omndeni.
Abasifazane yibona abahlaseleka kakhulu, bangama 25% abesifazane abahlushwa yisifo soku-hlukumezeka ngokomphefumulo ezimpilweni zabo, okungaphezulu ngokuphindwe kabili kwabesilisa abangu 12%.
Noma kunjalo abesilisa basengcupheni enkulu yokuzibulala, ngoba abakhulumi ngakho kalula. Basebenzisa izindlela ezisheshayo zokuzibulala.
Ukuhlukumezeka kwengqondo kubeka engcupheni umphefumulo womuntu ohlukunyezwayo. Ukulahlekelwa ngo-
thandiweyo ngo-kufa noma ngokunqamuka kobudlelwano kuyingozi. Ukuphatheka kabi kukodwa akusiyona imbangela yokuhlukumezeka kopmphefumulo ngoba uNkulunkulu usinikile amandla okunqoba nokubhekana nezimo ezinzima. Ukuphatheka kabi kakhulu kungabeka engcupheni yokuhlukumezeka ngokomphefumulo.
Ngingazisiza Kanjani Noma Omunye Ohlushwa Yisifo Sokuhlukumezeka?
Zinake wena nabantu abaseduze kwakho, uma ubona ezinye zalezizimpawu ezibalwe ngenhla, khuluma ngazo. Uma zenzeka kuwe ungaziphiki.
Thola usizo kwabaqeqeshiwe, kufane njengoba ungenamahloni ukucela usizo uma ugula ngokomzimba, akunalutho ukuthola usizo uma ugula ngokomoya.
Khuluma nabezengqondo, abeluleki noma abeFundisi. Ukucela usizo kuluphawu lokuhlakanipha nokugqugquzeleka, hayi lobuthakathaka nokungakholwa.
Sebenzisa ukwelashwa njengemithi yokuhlukumezeka oyilayelwe ngudokotela, akunabubi kulokho. Kungakusiza kukwenyule ekujuleni kokuhlukumezeka komphefumulo kukubeke ezingeni lapho ungakwazi ukwenza ezinye izinto ezibalulekile ezinomqondo ophilayo.
Yazi ukuthi uNkulunkulu useduze nawe. Kwesinye isikhathi ukuhlukumezeka ngokomqondo kwenza kubenzima ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Futhi kungakwenza uzizwe uqhela kuNkulunkulu. UNkulunkulu unenduduzo engajwayelekile yomuntu ukukholwa kwakhe okuthintwe ukugula.
Ukukhuluma ngakho kungakwelapha. Uku-xhumana kusiza abangani nabakulekelelayo ekukwazini ukukuqonda nokukunika ukukhanya esimweni sakho.
Bambelela Ezithembisweni ZikaNkulunkulu Ukhulume naye Njalo Ngomkhuleko
II Amakhosi 20:5, Isaya 40:29, AmaHubo 30:12
Uma uhlukumezekile ngokomqondo kuba segathi umthandazo wakho uvinjwe uphahla, kodwa leyo mizwa ayisilona iqiniso. UNkulunkulu ulalela ezwe izwi nezwi. Uma kunzima ukuthandaza, funda umthandazo njengakuMaHubo 42. Noma ucele umngani wakho akukhulekele.
Kumuntu nje ojwayelekile ophilayo, ukuzibulala kungukungacabangi. Kunzima ukukuqonda ukuthi othandiweyo angakhetha ukuzibulala kunokuphila nathi. Ukuzibulala kusabisa futhi kubadide abantu. Abantu bayakugwema ukukhuluma ngakho, bakuthatha njengehlazo. Kufanele kuqedwe nya emhlabeni ukuzibulala, kuyingozi enkulu kuwo wonke umndeni, ukuzibulala kungabulala othandiweyo uma singabhekani nakho ngqo, sikhulume ngakho.
Ukuzibulala Kuvame Kangakanani
Cishe unyaka nonyaka bangu 8 000 abantu abazibulalayo eNingizimu Afrika. Lokho kwenza kube inani lesithathu ekhulwini labantu abafayo, ngemuva kokubulawa kanye nezingozi zomgwaqo. Kukho konke ukuzibulala kunemizamo engama-20 yokuzama ukuzibulala. Eyodwa ingane kweziyi-12 esikoleni iyazibulala (izibalo Profesa Laurens Schlebusch, University of Natal, 2005). Yingozi le okumele omunye nomunye abhekane nayo.
Ungakuqonda Kanjani Ukuzibulala
UNkulunkulu umnikile omunye nomunye umndlandla wempilo ikakhulukazi abantu abasha. Umuntu ozibulalayo uphazamiseke kakhulu engqondweni nasemphefumulweni. Lokuphazamiseka kwenzeka kuqhubeka kuphindaphinda ngokucabanga okujwayelekile uze udonseleke ekuthatheni isinqumo sokuzibulala. Lokuphazamiseka engqondweni kuyiqiniso elingenakuphikwa, ngoba ukucabanga ngemizwa nangempilo kungakuholela ezimweni ezinzima.
Ukuvikela Kanjani Ukuzibulala
UNkulunkulu wasinikeza umsebenzi wokubhekana omunye nomunye wokuthwalisana ebunzimeni (Galathiya 6:2).
Omunye nomunye kufanele abheke izimpawu ezibeka omunye engcupheni.
Ukuhlukumezeka kungesinye sezizathu ezisemqoka ezidala ukuphazamiseka ngokucabanga nangemizwa nokuzibulala. Uma ubona izipmawu zokuhlukumezeka komphefumulo komthandayo njengoba zibhalwe ngenhla, kufanele kube khona okwenzayo, khuluma ngakho, umgqugquzele ukuthi athole usizo.
Ukulahlekelwa okukhulu kubeka engcupheni yokuhlukumezeka komphefumulo. Nemicabango ephambene nesimo sempilo, ngokulinganisa , ukufa noma ukulahlekelwa othandiweyo noma ukulahlekelwa umsebenzi, noma into eballekile onayo.
Ingcuphe yokuzibulala emadodeni ingaphezulu kane (4) kweyabesifazane, ngoba abathandi ukukhuluma ngezinkinga noma bacele usizo. Basebenzisa izindlela ezisheshayo zokunqamula impilo yabo.
Akukho ukuzibulala okubaluliwe okumele kunganakwa, noma kuthathwe njengokuzidonsela amehlo. Inani elingama 95% abazibulalayo bakhombisa lenjongo kusekude. Sifanele sifunde ukulalela. Imizamo edlule yokuzibulala iyisixwayiso.
Musa ukucabanga ukuthi ukuhluleka ukuzibulala umuntu ngeke azame futhi. Ingozi iba nkulu kakhulu uma umuntu eseqala ukukhuluma ngokuzibulala.
Isimo esinzima kakhulu yilapho umuntu eseqala ukwenza ukuzibulala ngenhloso kungesikho okwemvelo ekhombisa isiphetho ngesinqumo sokuzokwenzeka.
UKUZIBULALA KUNGAVIKELEKA. UTHANDO NOKUQONDA KWAKHO KUNGABA INDLELA KANKULUNKULU YOKUHLENGA IMPILO.
I got hurt what do I do now?
When God made the world, he meant for it to be a good place. A place where everyone could... read more
ŉ Lewe vry van vigs
Oor die laaste paar dekades hoor ons so baie van MIV en vigs, dat baie van ons begin afskakel... read more